Xiaomi Mi Watch Lite dia nambara tamin'ny fandrefesana SpO2 sy fizakantenany hatramin'ny 9 andro | Androidsis
Xiaomi dia nanolotra a singa vaovao ao amin'ny fianakavian'ny famantaranandro marani-tsaina mitondra ny anarana Mi Watch Lite. Tonga ity fitaovana vaovao ity taorian'ny nahatongavan'ny Xiaomi Mi Watch teny an-tsena herintaona lasa izay ary misy fahasamihafana vitsivitsy raha oharina amin'ilay maodely hafa.
Xiaomi Mi Watch Lite dia mitovy amin'ny Redmi Watch, dia natomboka manerantany miaraka amin'ny famaritana tena ilaina ary diniho raha mitady smartwatch kalitao ianao. Xiaomi dia niasa tamin'ny fomba miavaka ary nandefa izany eran'izao tontolo izao hivarotra singa maro.
1 Xiaomi Mi Watch Lite, momba ny famantaranandro vaovao daholo
Xiaomi Mi Watch Lite, momba ny famantaranandro vaovao daholo
Ny smartwatch vaovao dia mametraka ny efijery LCD 1,4-inch miaraka amina vahaolana 320 x 320 teboka ary mazava be ny mijery azy, manome ny fampahalalana hatrany amin'ny tontonana lehibe. Ny Xiaomi Mi Watch Lite dia nijery maody fanatanjahantena 11 tanteraka:
hazakazaka ivelany, bisikileta ivelany, bisikileta anaty trano, treadmill, lomano rano misokatra, lomano dobo, freestyle, cricket, trekking, làlana mihazakazaka ary mandeha.
Ao amin'ireo fiasa ireo ny sensor ho an'ny fo miaraka amin'ny fanaraha-maso, ny fikajiana ny haavon'ny oxygène ao anaty ra (SpO2), ny fanaraha-maso ny torimaso, ary ny mpanampy iray hifehezana ny fifohana rivotra. Ahitana ny safidin'ny antso, SMS ary fanairana fampandrenesana amin'ny app, fanaraha-maso mozika, fanairana tsy miasa, finday ary tatitra momba ny toetr'andro.
230 mAh ny bateria miaraka amin'ny fizakantenany tokony ho 9 andro amin'ny fampiasana mitohy miaraka amin'ny fiampangana 1 ora sy sasany eo ho eo. Milanja 35 grama ny famantaranandro, manana fifandraisana Bluetooth 5.0 sy GPS tafiditra, izay fifaninanana mazava avy amin'ny tarika Huawei Band 4 Pro.
XIAOMI MI JEREO LITE
SCREEN LCD 1.4 santimetatra misy vahaolana 320 x 320 pixel
BATERA 230 Mah
AUTONOMY Mahatratra 9 andro
Sela Mpandray Hafanana Sensite tahan'ny fo / saturation Oxygène rà / Fanaraha-maso torimaso / Fanaraha-maso ny taovam-pisefoana / Accelerometer / Gyroscope / GPS
Software Maody fanatanjahan-tena 11
DIMENSION SY lanjan'ny: 41 x 35 x 10.9 mm / 35 grama
Xiaomi Mi Watch Lite dia misy amin'ny tranokalan'ny mpanamboatra ankehitriny, tsy nanome daty voafaritra mazava fa ny zava-drehetra dia manondro fa ho avy tsy ho ela. Ny vidin'ny Xiaomi Mi Watch Lite dia mbola hamafisina ihany koa, na dia hitovy amin'ny an'ny Redmi Watch aza izy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi » Xiaomi Mi Watch Lite dia nambara tamin'ny fandrefesana SpO2 sy ny fizakantenany hatramin'ny 9 andro
tennsy@hotmail.com dia hoy izy:
Afaka manao famandrihana ve ianao ???
Valio ny tennsy@hotmail.com
Tennsy tsara, amin'ny alàlan'ny pejy amin'izao fotoana izao, saingy antenaina fa ny famandrihana ary avy eo ny fividianana dia afaka roa herinandro eo ho eo.
Ahoana ny fomba hampandehanana ny hitsin-dàlana amin'ny haino aman-jery efijery amin'ny Huawei
Mijia IMILAB dia fakantsary fanaraha-maso horonantsary manana sandam-bola lehibe